Ihe ngwungwu maka nkwado mmepe ngwanrọ na DEBIAN 10 | Site na Linux
Nke a bụ n'ihu (nke atọ) nke nkuzi raara nye DEBIAN GNU / Linux Distro, mbipute 10 (Ọkara), nke na-abụrụ ihe ndabere nke ọtụtụ ndị ọzọ dị ka MX-Linux 19 (ujo ojoo).
Na nke atọ a anyị ga-egosi nchịkọta dị mkpa (ngwa) kwadoro iji nye ihe dị mkpa nkwado nke nkiti maka mmepe, ule na igbu ya nke ụfọdụ sọftụwia (ngwa) banyere ndi mara mma ma di uku nke Distros DEBIAN 10 na MX-Linux 19.
Ihe 2 gara aga na usoro a bụ:
Melite ma bulie MX-Linux 19.0 na DEBIAN 10.2 mgbe ị wụnyechara (Lee ntinye)
DEBIAN 10: Kedu ngwugwu ndị ọzọ bara uru mgbe ị wụnye? (Lee ntinye)
Cheta ma buru n'uche na:
1 Ngwungwu maka nkwado mmepe sọftụwia
1.1 Nkwado maka ngwa Java
1.2 Nkwado maka ngwa QT5
1.3 Nkwado maka ngwa Ngwuputa Dijitalụ
1.4 Nkwado ngwa weebụ
Ngwungwu maka nkwado mmepe sọftụwia
Nkwado maka ngwa Java
Ebumnuche: Wụnye nkwado bụ isi maka ndakọrịta na ngwa Java.
Nkwado maka ngwa QT5
Ebumnuche: Wụnye nkwado ndabere maka ndakọrịta na ngwa ndị ejiri QT5 rụọ.
Nkwado maka ngwa Ngwuputa Dijitalụ
Ebumnuche: Wụnye nkwado nke ngwa ngwa, ndị ọkwọ ụgbọala na ọba akwụkwọ dị mkpa maka ntinye na njikwa nke ngwa Ngwuputa Digital.
Ebumnuche: Wụnye nkwado n'ọbá akwụkwọ dị mkpa maka mmemme na-eji ọbaakwụkwọ nchekwa data Berkeley v5.3, nke ọtụtụ ngwa Digital Mining nke oge a jikọtara ma / ma ọ bụ gbaa ọsọ.
Nkwado ngwa weebụ
Ebumnuche: Wụnye nkwado dị mkpa maka ngwa weebụ kachasị maka Apache2 ma ọ bụ dakọtara.
Ebumnuche: Wụnye nkwado bụ isi maka ngwa weebụ kachasị maka Nginx.
Ebumnuche: Wụnye nkwado bụ isi na nkwado ọrụ maka ijikwa ọdụ data dabere na Postgresql.
Ebumnuche: Wụnye nkwado ngwa ngwa maka njikwa nchekwa data nke Postgresql.
Ebumnuche: Wụnye isi iwu na ọrụ nkwado maka ijikwa ọdụ data dabere na MySQL.
Ebumnuche: Wụnye nkwado ngwa ngwa maka njikwa nke ọdụ data dabere na MySQL.
Ebumnuche: Wụnye nkwado na nkwado ọrụ maka ijikwa ọdụ data dabere na MariaDB.
Ebumnuche: Wụnye nkwado bụ isi na nkwado ọrụ maka ijikwa ngwa ndị dabere na PHP.
Ebumnuche: Wụnye nkwado bụ isi nke ụlọ akwụkwọ ọbá akwụkwọ maka ijikwa ngwa ndị dabeere na PHP.
Ebumnuche: Wụnye ntọala na-abụghị nke ụmụ akwụkwọ maka ijizi ngwa ndị dabere na PHP.
Ebumnuche: Wụnye iwu na nkwado ọrụ maka ijikwa ngwa ndị dabere na ngwa PERL.
Ebumnuche: Wụnye nkwado ndabere akwụkwọ maka ijikwa ngwa ndị dabere na ngwa PERL.
Ebumnuche: Wụnye iwu na nkwado ọrụ maka ijikwa ngwa dabere na Python.
Ebumnuche: Wụnye nkwado iwu na nkwado maka ijikwa ngwa ndị Python3.
Anyị na-atụ anya na esta "bara uru obere post" banyere ngwugwu dị mkpa iji nye nkwado dị mkpa maka ihe ziri ezi «instalación y gestión» nke ụfọdụ sọftụwia, banyere Distros «DEBIAN y MX-Linux», nwee nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke okike, gigantic na eto eto nke ngwa nke na maka «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Ngwungwu maka nkwado mmepe Sọftụwia na DEBIAN 10
Mezie m ma ọ bụrụ na m mejọrọ, mana .. na debian, ha ewepụghị phpmyadmin site na nchekwa?
na ịwụnye php, ịkwesighi ịkọwapụta (dịka ọmụmaatụ) php7.3, ma ọ bụ php7.3-curl
Daalụ Twikzer! Daalụ maka okwu gị. N'ezie phpmyadmin adịghị na nchekwa ego DEBIAN 10 (Stable) mana ọ dị na nchekwa DEBIAN 11 (Ule) site na ihe m chere, na n'oge ụfọdụ ha ga-etinye ya dị ka ngwugwu ndị ọzọ na ndị kwụsiri ike, mana ị nwere ike ma ọ bụ nwee ike ịhapụ ya, na-enweghị Agbanyeghị, ọ bụ ya mere m ji hapụ ya ebe ahụ. Banyere nke abụọ, ọ dịghị mkpa, ebe ọ bụ na a na-akpọ nsụgharị ndị dị ugbu a n'ime ebe nchekwa aha ha.
Linux Lite 4.8, nke ọzọ na Windows 7 dị ugbu a